के हाे पल-समीक्षा विवाद ? दुवैले दिए पालैपालाे स्पष्टीकरण
पलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफुलाई हुँदै नभएको र नगरिएको आरोप लगाइएको बताएका छन् । 'काम गर्ने क्रममा व्यक्ति वा समूहसँग नजिक भइन्छ र सांगीतिक सहकार्य समीक्षासँग भएको हो' पल लेख्छन् ,'पछिल्लो केही दिनयता आएका खबरले मेरो शुभचिन्तकसँगै परिवारलाई समेत दु:खी बनाएको छ ।' समीक्षासँग रहेको मित्रतालाई अन्य नाम नदिन आग्रह गर्दै उनले चरित्र हत्या हुने गरी समाचार नबनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै समीक्षाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नै आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेकी छिन् । उनले पलसँग जोडिएर आएको समाचारहरू कपोकल्पित रहेको उल्लेख गरेकी छिन् । 'पलजीसँगको सम्बन्धलाई तोडमोड गरेर आएको समाचारले मेरो चरित्रहत्या भएको छ' उनी लेख्छिन्, 'एउटै नगरीमा रहेकाले उहाँले मलाई अभिभावकको हिसाबले माया गर्नु हुन्छ र दर्शकको माया पाएसम्म हाम्रो सहकार्य रहिरहने छ ।'
केही समययता पल र समीक्षाको प्रेमको चर्चा फिल्मनगरीमा छ । पछिल्लो समय पलको म्युजिक भिडियोमा व्यस्तता अत्यधिक छ । तर, यो चर्चा चलेयता उनले इभेन्टमा सहभागिता जनाउन छाडेका छन् । उनलाई भिडियोमा अभिनय गराएका एक निर्देशकले पलले इभेन्टमा आफू नआउने बताउने गरेको खुलाए । 'पलजी भिडियो सार्वजनिक कार्यक्रममा भने नआउने भन्नु हुन्छ' उनले भने । यी दुईको बीचमा सहकार्यबाहेक अन्य केही नरहेको अवस्थामा मिडियासँग साक्षात्कार गर्न डराइरहेका छन् ? त्यो त यिनैले जानून् ।
म्युजिक भिडियो छायांकनकै क्रममा पल र समीक्षा नजिकिएका हुन् । समीक्षाको गायन रहेको गीतको भिडियोमा समीक्षासँगै पल मोडल थिए । यही सहकार्यले यी दुईको सामीप्यता बढेर प्रेममा परिणत भएको हल्ला छ । समीक्षाले त्यसलाई 'प्रेम' कै रूपमा बुझे पनि पलले हल्काफुल्का रूपमा हेर्न थालेपछि यी दुईको चर्चा फिल्मनगरीमा चुलिएको हो । पलको सम्बन्ध अन्य फिमेल मोडलसँग प्रगाढ हुँदै गइरहेको र आफूसँग टाढिएको महसुस गरेपछि समीक्षाले आफूसँग रहेका डिजिटल प्रमाणहरू (फोटो/भिडियोहरू) सहित पुलिस केस गर्ने तयारी थालेपछि यो 'प्रेम' को चर्चा फिल्मनगरीमा बढ्न थालेको हो । समीक्षा नाबालिग भएकाले उमेर पुगेपछि पलले विवाह गर्ने सहमति गरेको चर्चा बढ्दो छ । पलले आर्थिक प्रलोभनसमेत दिएको बताइन्छ । यद्दपी समीक्षा र उनका परिवारहरूले विवाह गर्नु पर्ने अडान राखेपछि सम्झौता उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने भएको बताइन्छ ।
मनाङ-मर्स्याङ्दीकाे लगातार दोस्रो जित ५ घण्टा पहिले